Farriin ku socota xisbiyada qaranka. Qalinkii: Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan |
Farriin ku socota xisbiyada qaranka. Qalinkii: Dr. Maxamed-Rashiid Sheekh Xasan
Maalmahan waxa xoogaystay dagaalka afka ah ee ay xisbiyadu isku qaadayaan iyo borobagaandhada siyaasiga ah ee la isku marinayo warbaahintaee la socota xummadda doorashada. Xilligan oo doorashadii madaxtooyadu kaabiga innagu soo hayso maaha wax lala yaabo in madaxda qaar ay ka soo yeedhaan hadallo xanaf leh oo dadka qaybin kara. Xisbiyadeenu maanta way ka siman yihiin hadalladaa aan ka fiirsiga lahayn laakiin qaarkood ayaa u eg in ay ku talax tagayaan. Gaar ahaan maan jeclaysan in xisbiga Waddani madaxdiisu ay marar dhawr ah shacbiga xasuusiyaan dagaalkii sokeeye.
Waxan jecelahay in aan xisbiyada xasuusiyo in fursadda ay maanta ku tartamayaan ay ku heleen nabadda iyo horumarka ka jira Somaliland sidaas daraadeed aan looga fadhiyin in ay dadka ugu abaal gudaan ereyo nabadda dhaawacaya. Tartanka quruxdiisu waxay ku jirtaa in xisbi waliba barnaamijkiisa soo bandhigo, dadkana tuso sida uu uga maamul fiicnaan karo xisbiyada kale.